यिनै हुन् विमान दुर्घटना भएको ३६ दिनसम्म बच्न सफल भएको पाइलट, सर्प र गोहीले भरिएको जंगलमा कसरी बाँचे ? – NepalajaMedia
March 9, 2021 432
काठमाडौं। विमान दु र्घ ट नामा बाँ चेका एक पाइलटले निकै सकसपूर्ण तरिकाले आँफुलाई बचाएको रहस्य खोलेका छन् । खबर हो ब्राजिलको पारा राज्यबाट उडान भरेको विमानको । अमेजनको जंगलमा दुर्घट नाग्र स्त भएको विमानका ती पाइलट एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म चराका अण्डा र जंगली फलफुल खाएर बाँचेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार ३६ वर्षमा एन्टोनियो सेनाको उनी हराएको ५ हप्तापछि नाटकीय खोजी र उद्धार अभियानको सहयोगका क्रममा उनी हराइरहेको स्थानबाट उनको उद्धार गरिएको हो । सेनाले २८ जनवरीमा ब्राजिलको पारा राज्यको अलेन्क्वेरबाट विमान उडाएर शंकास्पद प्राविधिक गडबडीपछि जंगलमा आकस्मिक अवतरण गराएको बुझिएको छ ।
जंगलमा सहयोग खोज्दै भौंतारिँदै रहेका बेला ४ हप्तापछि उनले जंगलमा कटुस बटुल्न गएका स्थानीयले यो खबर बाहिर ल्याएपछि आकस्मिक टोलीले उनको उद्धार गरेर अस्पताल भर्ना गरेको छ । उनले चराका अण्डा, जंगली फल खाएर ३६ दिनसम्म आँफु बाँ च्न सफल भएको बताएका छन् । उनी जंगलमा सहयोग खोज्दै भौंतारिँदै रहेका बेला ४ हप्तापछि उनले जंगलमा कटुस बटुल्न गएका केही व्यक्तिहरुलाई फेला पारे । ती स्थानीयले यसबारे खबर फैलाएपछि उनको उद्धार सम्भव भएको थियो ।
जंगलमा गोही र सर्पको बि गबि गीले आँफु निकै आ त्ति ए को समेत सेनाले हालैको एक अन्तरवार्तामा उल्लेख गरेका छन् । उनको अश्रुमिश्रित पारिवारिक पुनर्मिलन ब्राजिलियन टिभीमा प्रसारण गरिएको थियो । लगत्ते उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो । उद्धारपछि भावुक बनेका एन्टोनियोले भने ‘यो अवधिमा मलाई बलियो राख्ने र मलाई त्यो कठिन परिस्थितिबाट बाहिर निकाल्न हिम्मत दिने कुरा भनेको मेरो परिवारका लागि मभित्र भएको प्रेम र मेरो परिवारलाई भेट्ने मेरो तीब्र इन्चा थियो । यो प्रेम र विश्वासको कथा हो ।’
Prevसोच्न नसकिने गरी घट्यो सुनको मूल्य।कति छ आजको सुनको मूल्य,हेर्नुहोस
Nextफागुन २६ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
घातक तुवाँलोले ढाक्यो वायुमण्डल : मौसममा तत्काल सुधार नहुने, सावधानी अपनाउन आग्रह, हिमाली भाग नाघेर तिब्बत पुग्यो